အမျိုးအစား: ယာဉ်ထိန်းရဲ, ပညာရေး, အခွင့်အရေး
မည်သို့တရားဝင်တစ်ဦးမောင်းနှင်ကျောင်း၏ပြီးစီး၏လက်မှတ်? Ext ဘဝအပေါ်ဓာတ်ပုံကို http://www.avtoshkolakam.ru/poleznaya-informatsiya/31-skolko-dejstvuet-svidetelstvo-ob-okonchanii-avtoshkoly http://www.zmost.ru/notes/experts/379-svidetelstvo-ob -okonchanii-avtoshkoly-srok-dejstviya သီအိုရီမောင်းနှင်မှုကျောင်းပြီးဆုံးတဲ့လက်မှတ်အများပြည်သူစာရွက်စာတမ်းအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမဆိုနဲ့အခြား, ဒါပေမယ့် ...
ငါရုတ်သိမ်းလုပ်ကိုင်ရန်ရှေ့နေများ၏မော်တော်ယာဉ်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲရန်ရှေ့နေတစ်ဦးအာဏာကိုမလိုအပ်ပါစေနဲ့။ နိုဝင်ဘာလ 24 တွင်ကားကိုမောင်းဖို့လက်ျာကိုအတည်ပြုရန်ယာဉ်မောင်း, လက်ျာ, အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိထားသင့် ...
လက်ျာဘက်လက်ျာဘက်စက်နှင့်လယ်ထွန်စက်ပေါ်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ဒါဟာမေးခွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်?))) ဆိုင်ကယ်၏အသံအတိုးအကျယ် 50 Cube ထက်ကျော်လွန်လျှင်အမျိုးအစားတစ်ဦး၏အခွင့်အရေးကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဂျပန်ဆိုင်ကယ် Cube 100 ဖို့ပေမယ့် ...
ဘယ်လိုအဘယ်မှာညွှန်ကြားချက်ကားမောင်းမှုအတွက်လိုင်စင်ရရှိရန်? သင်တို့အဘို့တဏှာခံစားရလျှင်သင်ပြီးသားဆိုဂီယာနှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်စက်မောင်းသုံးနှစ်ရှိပါက ...
အစည်းအဝေးတစ်ခုမှတလမ်းလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကဘာလဲ? သင်တစ်ဦးအုတ်ရှိကွောငျးကိုသကျသပွေနိုင်လျှင်, ထို့နောက်တစ်ဦးစီးနင်းလျက်နှင့်မလျှင်,4peshehodstvovat လအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, နောက်ထပ်ပို ...
တစ်ဦးမောင်းနှင်ကျောင်းကသင်တန်းတစ်ခုလက်မှတ်မ, သောအခွင့်အရေးများ cdavat နိုင်ပါသည်ဘယျအခြိနျဘောင်အတွက်ဘယ်လောက်ပါလဲ? ပြီးစီး၏ drive လက်မှတ်န့်အသတ်မရှိပညတ်တော်အတိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအင်စတီကျုမှာဒီပလိုမာနဲ့တူရဲ့။ ဆိုသည့်အတိုင်း ...
လိုင်စင်ခအမျိုးအစားကိုဝယ်ခြင်းငှါကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ? ငါသည်ခပ်သိမ်းသော vysheizyasnivshihsya စောင့်ရှောက်လော့။ သင်ပေး။ နှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်။ traffic စည်းမျဉ်းများသွေးထဲတွင်ရေးထားလျက်ရှိ၏။ အသကျရှငျသငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့စည်းမျဉ်းများအသိပညာ။ ပေါင်းကသူတို့ကိုယ်သူတို့ငါ့ကိုအကောင်းတစ်ဦးခံစားချက်ယုံကြည်လွန်ဂုဏ်ယူပါလိမ့်မယ်။ ...
အသစ်ကမှအဟောင်းကိုဆိုဗီယက်အခွင့်အရေးများကိုပြောင်းလဲရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ငါ Re-စာမေးပွဲလိုအပ်ပါသလား? အခွင့်အရေးများ 1975 လာမှမသိပေမယ့်တစ်ပါတ်တစ်ဦးစာအုပ်နှင့်တကွ, စာမေးပွဲလာ zdat, သို့သော်ဤဒဏ်ဍာရီဖြစ်ပါတယ်နှစ်တွင်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည် ...
ဆီးနှင်းများရှေ့ရှေ့ဘီးတစ်စီးပေါ်တွင် "မျော" ပုံ
ဆီးနှင်းများရှေ့ရှေ့ဘီးကိုမည်သို့မောင်းနှင်ရမည်နည်းမောင်းနှင်သည့်ဘီးများ၌ torque အလုံအလောက်ရှိသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကသူတို့သည်စလစ်ထဲသို့မ ၀ င်ရဘဲကားသည်တုံးကဲ့သို့ရွေ့လျားသွားမည်။
ယာဉ်ထိန်းရဲ, တူညီတဲ့ပြဿနာရှိမပြည်နယ်န်ဆောင်မှု ... ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးလာရှိစေခြင်းငှါ, ပျားရည်ပေါ်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကိုကူညီပါ။ သငျသညျဆန်းစစ်ရာစင်တာ။ ဖြစ်ရှိရှိပါတယ် ...
တစ်ဦးပြစ်ဒဏ်အမျိုးအစား B ကမပါဘဲတစ်ကားကိုမောင်းများအတွက်ချမှတ်ထားပေမယ့်တထောင်ရူဘယ် + shtrafstoyanku5မှ 15 ကနေတိုတိုနဲ့အမျိုးအစားလည်းမရှိ။ ! အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ကျင့်ထုံးပုဒ်မ 12.7 1: https: //temuri.ru/ezda-bez-kategorii / ...
circuit ပေါ်ရှိ "overpass" element ကိုမှန်ကန်စွာမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
circuit ပေါ်ရှိ "overpass" element ကိုမှန်ကန်စွာမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ နည်းပြဆရာကငါ့ကိုသင်ကြားပေးစဉ်ကတည်းကစာမေးပွဲဖြေရန်ငြင်းသည်
ခိုးယူယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြန်လည်! ပျောက် restore ရန်။ ခိုးယူသို့မဟုတ် Vu နှင့်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပျက်စီးသင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်အာဏာ OGIBDD ဘယ်မှာအသစ်တခု UW နှင့်များ၏ထုတ်ပေးရေးများအတွက်လျှောက်လွှာရေးသားဖို့ဆက်သွယ်သင့် ...
အဘယ်အရာကိုဆရာဝန်များကပျားရည်ရဖို့ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်။ တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အပေါ်ကိုကူညီပါ? ကျနော်တို့ .. တစ်ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူများနှင့်အထူးကုလည်းမရှိ .. ကော်မရှင်များ၏အသွားအလာကိုရဲတွေနဲ့ chat ... အားလုံး ... 15 မိနစ် .. အကူအညီအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ၏လက်ကိုကူညီဖို့ ...
အဆိုပါလမ်းဘေးအပေါ်ဝင်ပေါက်အပြီးအပိုင်ရပ်ထားကားတစ်စီးမှာကအကြောင်းတိုင်ကြားမှအသိဖြစ်စေလျက်, အဘယ်မှာမသွားပါသလဲ? လျှောက်ထားရန်ကြိုးစားပါ, ဆွဲထားသို့မဟုတ် obosnuete လျှင် intelligibly ကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာ post ကို ထား. , ကနေဒဏ်ငွေနိုင်ပါတယ် ...
လယ်ထွန်စက်အမျိုးအစား "D" နှင့် A3 အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ K-700 သည် D နှင့် Belaz သည် A3 ဖြစ်သည်။
လယ်ထွန်စက်အမျိုးအစား "D" နှင့် A3 အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ K-700 သည် D နှင့် Belaz သည် A3 ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရသည်မှာ D သည်သင့်အားလမ်းပေါ်သို့ခေါ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပေါ်ရှိအထူးပြုဖိုရမ်သို့သွားပါ။
Non-ငွေပေးချေလျှင်အချို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ယာဉ်ထိန်းရဲဒဏ်ငွေဖျက်သိမ်းနေကြသနည်း 1 တစ်နှစ်ကနေတဆင့်ယာဉ်ထိန်းရဲများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သင်ရှာကြိုးစားခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုလုပ်နှင့်ယာဉ်ထိန်းရဲထားပြီလျှင် ...
ယာဉ်ထိန်းရဲတွင်စာမေးပွဲ "city" ကိုဝယ်ရန်ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
ယာဉ်ထိန်းရဲတွင်စာမေးပွဲ "city" ကိုဝယ်ရန်ဘယ်လောက်ကျမလဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာချော်မည်။ လွန်ခဲ့သော2လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 15 ရူဘီထောင်ပေါင်းများစွာသည်ပြtroubleနာကင်းသောလက်နက်ချခြင်းအတွက်ပေးဆပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဒေါ်လာစျေးငွေလဲနှုန်းကသိပ်မပြောင်းဘူးဆိုတော့စျေးနှုန်းက ...
သင်သည်အဘယ်သို့တစ်ဦးမောင်းနှင်ကျောင်းမှာစာရင်းသွင်းရန်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါရှိသည်။ ဘာလဲ? အဆိုပါယာဉ်မောင်းကျောင်းက? အမှတ် ။ သငျသညျလာမယ့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်အတူအရာအားလုံးကို .. အဖွားထံမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့်ထောက်ခံစာငွေကြေးနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပတ်စ်ပို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ် ...
လူ့အခွင့်အရေးကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, ယာဉ်ထိန်းရဲအတွက်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီးနောက်အဘယ်သို့ပြုသနည်း သူတို့ဒါ, ထို့နောက်မှာဟုပြောနေသောကြောင့်ရုရှား, မော်စကိုယနေ့ပေးအပ်ရှိရာကိုသွား, ကိုယ့်ပြတင်းပေါက်နှင့်မဆို Gauvreau အကူအညီနဲ့မှသွားရ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,341 စက္ကန့်ကျော် Generate ။